Semalt: WordPress Plugin For Site yako - Top Advice
WordPress themes inoita kuti zvive nyore kune vashandisi kuvaka mazita akasiyana-siyana ewebhu. Zvisinei, nzira yekugadzira inoita kusarudza musoro wakakwana kwazvo. Nenzira yakanaka, ikozvino zvinoita kuputsa raibhurari pasi kusvika kune zvikamu zvinonzwisisika zvepachena kana premium, uye chinangwa chimwechete kana kuti zvinyorwa zvakawanda.
Oliver King, mumwe wevanyori vane ruzivo rwakanyanya kubva Semalt , anopa munyaya yacho tsanangudzo inobatsira munyaya iyi iwe unofunga.
Kusiyanana pakati peHitori nePega yePeoplePress Themes
WordPress inobatsira kuisa nheyo dzewebsite yako - baumwollstoff meterware kinder. Nyaya yakanakisisa yeShokoPress inoita kuti zvive nyore kuchinja saiti yako kudiwa yako. Ingosarudza chete iyo inokodzera yako yakagadzirwa. Zvinoda iwe kutanga kuti unzwisise kuti zvipi zvingasarudzwa zviripo.
Zvinotsigira uye Zvinotengeswa Zvemashoko eDhiyabhorosi Mashandi
Misoro yeShokoPress yakasununguka yakakosha kune avo vashandisi vasina bhajari asi vari kutsvaga mazano ewebsite. Misoro yakasununguka haibereki purogiramu kune vakukudziri nerudziro. Vashandi vanogona kunge vasina rusununguko, pane dzimwe nguva, kupa rubatsiro rwakazvitsaurira kana kushandiswa nguva dzose kwevashandisi vavo. Chigumisiro ndechekuti inodzinga webhusaiti yepamusoro kune ngozi kune ngozi.
Pane zvakawanda zvinyorwa zvisingashandisi izvo vashandisi vanogona kushandisa mawebsite avo. Kunyange zvazvo zvisiri zvekutengesa, ramba uchifunga mupfungwa 'chenjerera' fungiro yepfungwa uye urambe wakangwarira pane zvidzidzo zvauri kuvaka iwe webhusaiti yako pa.
Nzira neZvibvumirano zveMutambo wePeople WordPress
Kubatsirwa kwemashoko ekutanga ehurukuro ndeyekuti vanouya nekutsigirwa kwakatsaurirwa. Vanokonzera imwe nguva yekubhadhara pakutenga, asi izvi zvinogona kuchinja zvichienderana nenhamba yemasayiti inoshandiswa nemunhu kuisa pairi. Mitemo yePeumumendi inogadziriswa nguva dzose uye yakachengeteka. Dzimwe nguva dzinopedzisira dzichidzivirirwa sezvo pane nguva dzose inokurumidza kusunungura mamwe maitiro kunyange zvazvo asingabatsiri vese vashandisi.
Kusiyanisa pakati peChirongwa Choga uye Multipurpose WordPress Themes
Kusarudza pakati pehurukuro yepachena uye yepakutanga ye WordPress inongova nhanho imwe chete kusvika pakudzika kusvika kune yako. Zvadaro, unofanira kusarudza kana iwe webhusaiti yako ichitsvaga chinangwa chimwe chete kana chimwe chinhu. 10)
Maitiro uye Kuda kweChirangaridzo Chinangwa WordPress Themes
Zvimwe zvinyorwa zvinotarisirwa zvinongorongedza ndima imwechete yewebsite. Semuenzaniso, inogona kunge iri chimbo chesaiti seblogi, kana imwe mhizha.Ivanobetsera vashandi mune kuti vanopa 'endpoke' mugumo wekugadzirwa uye inowanzosvitsa kupfuura zvinyorwa zvakawanda. Nekukanganisa kwavo pamashandisirwo avo, unogona kutarisira kutsigira kwepamusoro.
Chirevo chekukanganiswawo hachibatsiri nzvimbo yekushandura. Zvinoreva kuti kana pane imwe nguva mune ramangwana unonzwa sekushandura nzvimbo yako, saka unogona kutarisa chimwe chinhu chitsva nokuti chinangwa chimwe chete musoro hachizoiti zvakakodzera.
Maitiro uye Nhoroondo ye Multipurpose WordPress Themes
Chinyorwa chakasiyana-siyana chinyorwa chimwe chete nezvimwe zvinhu zvakasiyana-siyana uye zvishandiso zvinotarisirwa kuti zvigone kugovera chikamu chavo chemusika. Izvi zvinyorwa zvine ruzivo rwakakura rwekuvakwa kwekutanga kwekuvakwa uye demos uye plethora yezvikamu uye bundled WordPress plugins. Iko kusanganiswa kunoita kuti zvikwanise kuvaka chero webhusaiti kune chero zvakasarudzwa zvinodiwa. Izvo chete zvisiri izvo ndeyemasimiti ane unhu hwepamusoro hunodiwa hunodiwa. Kana ukasarudza yepamusoro-soro yepamusoro-soro, unogona kusambofanira kutenga chimwe chinyorwa munguva yemberi. Multipurpose themes zvinowanzoita kuti kuve nekubhururuka uye haisi iyo sutu yakanakisisa yekuwana zvinodiwa zvakasiyana.
Zvinokonzera Kusarudza Musoro Wakarurama
1. Budget: sarudza musoro wakasununguka kana usina mari yekushandisa. Kana zvisina kudaro, kupedza pahutano kunogona kukubatsira zvikuru munguva yemberi.
2. Uri kuvaka chii? Sarudza imwechete musoro musoro kana iwe uchiziva rudzi rwewebsite unoda kukura, iine chokwadi chezvinhu zvinodiwa, uye unovimba kuti izvi zvinoda hazvigadziri kuchinja chero nguva pfupi. Kana uri kutsvaga kusagadzikana kwehutano uye kushanduka kwemamiriro ezvinhu, ipapo shanduro yakasiyana-siyana ndiyo yako yakanakisisa kubheji.
Dzimwe nzvimbo dzaungatanga kutanga kutsvaga kwemashoko ndeShokoPress.org uye ThemeForest. Misoro yakasununguka inongova yeShokoPress.org, asi unogonawo kushanyira ThemeIsle, HeroThemes, kana Nimbus Themes nokuda kwepamusoro yepayimusi tsvakurudzo.
Pasinei nedambudziko rehuwandu hwemashoko eEpressPress, kutora zvakakodzera kwauri kunouya kune izvo zvinokodzera bhajeti yako uye zvino zvinosungira iwe webhusaiti yako.